SomaliTalk.com » Yididdiillada Dadkeenna
Ololihii doorashada madaxtinnimada Soomaaliya iyo loollameyaashii tartamay iyo xildhibaannada baarlamaanka ee codeeyay iyo madaxweynihii hore oo aqbalay tirsigii looga badiyay ayaa dhammaantood ah isbeddel siiyaalku tixgelin doono oo waayo badan la xusuusnaan doono. Qaabkii ay doorashadii 8-da bisha labaad, 2017-ka, ay u dhacday baa ahaa mid si walba u qurxoonaa oo qaarad walba, dal walba, magaalo walba iyo tuulo walba oo Soomaalidu ku nooshahay dunida ay si aan la koobi karin ugu riyaaqeen. Waxaa hal mar cirka isku shareeray yididdiillada dadkeennu u qabay hoggaan wanaagsan iyo dimuquraaddiyad wacan intaba.
Dhallinta oo ugu doorroonayd bulshada u hanqaltaageysay doorashada dareenkooduna aad u sarreeyay oo weliba si aan horay loo arag ugu kuurgalayay tartanka, isla markaas naawilayeen hoggaanka guulaystay gunaanadkii ayay doorashadu ugu muuqatay mid siyaalo badan uga duwanayd heerarkii/loollameyaashii/ololeyaashii hore, ayada oo ay markii hore liidatay filashadu sababo la xiriiray musuqmaasuq la baahiyay awgiis.
Isbeddelka sidaas ah culays weyn ayuu saarayaa madaxweynaha cusub oo badinayaa cadowgiisa, sababta oo ah damiirlaaweyaashii danaha gurracan lahaa oo isugu jiray sokeeye iyo shisheeye aan u turayn dalka iyo dadka oo ay riyada rumowday aydin ku tahay, waa col mar walba oogan oo fiiro iyo feejignaan gaar ah mudan. Haddii kale hog ayay gelaysaa yididdiillada dadkeenna.
Arrimaha Soomaaliya ku gedaaman, oo hawl badan sugayso, waa laga miro dhalin karaa yoolka ah in dalku caadi ku soo noqdo oo dadku nolol helo. Farogelinta dalalka deriska ah waxa ay tebaysaa in lagu xalliyo habraaca diblomaasiyadda iyo firfircooni joogtaysan oo u muujiyaya in Soomaaliya oo cagaheeda ku istaagta aysan waxyeello u gaysan doonin nabad sugiddooda. Goor walba siyaasadda dalku waa in ay tixraacayso sixidda qaladaadkii hore soo na afjarayso wixii isafgaranwaa ah oo jira si loo tirtiro tuhun wixii jira—xataa haddii ay u baahato guddi heer qaran ah oo si joogto ah ugu hawlan samaynta/soocelinta xiriir togan. Garashada hagaagsan waxa ay tilmaamaysaa in inta uu jiro tuhun u dhexeeya Soomaaliya iyo dalalka la deriska ah ay adag tahay in dalku saldhigto. Dabcan Soomaaliya ma ay dooran karto deriska ay leedahay balse qaabka ay deriskaas u la dhaqanto ayay dooran kartaa xumaan iyo samaan.